I-AdraInformatica - Ubuchwepheshe, iHardware, iSoftware, Imihlahlandlela nezinhlelo zokusebenza
Ubuchwepheshe, i-Hardware, iSoftware, Imihlahlandlela nezinhlelo zokusebenza
Umhlahlandlela womdlalo wevidiyo iBayonetta 3
IBayonetta 3 yingxenye yesithathu, ehlelwe futhi yathuthukiswa yiPlatinumGames, ye-saga edumile ne-slash saga ebhekene nomthakathi odumile. Umdlalo wevidiyo wenzelwe kuphela iNintendo Shintsha, ikhonsoli yeNintendo.
Umdlalo wevidiyo onconyelwe kakhulu kubo bonke abalandeli bomdlalo yiBayonetta 3. Lo mdlalo wevidiyo njalo lapho yaziwa kakhulu phakathi kwabalandeli bayo nalabo abathatha isinqumo sokuzama. Futhi kuyaziwa ukuthi ukudlala umdlalo weBayonetta 3 kuyinto emangalisayo.
Kumhlahlandlela olandelayo uzothola imininingwane ongaqala ngayo ukudlala iBayonetta 3 ezoba lula kakhulu kuwe. Ngaphezu kwalokho, inamathiphu okuqala ukudlala lo mdlalo ngaphandle kokuthi ube yijuba eliwele esidlekeni, ngoba yize ungeke ube yingcweti, okungenani uzofunda izisekelo.
Inini i-premiere yalo mdlalo?
Olunye lwezinsuku ezilindelwe kakhulu kubalandeli be I-Bayonetta 3 es usuku lokukhulula, ngalesi sikhathi umdlalo wevidiyo uzokhishwa futhi uzotholakala ngo- aduduzayo-iyatholakala. Enye yezinto ezifiseleka kakhulu ukwazi wonke lawo mathuba ezokwenza ukuthi itholakale nezindaba ezizomangaza ngazo umphakathi olandelayo.
Amathiphu wokugqama eBayonetta 3
Ngakho-ke kufanelekile ukuqala ukukhuluma ngegama le- amaqhinga azoba wusizo kuwe, ngesikhathi iBayonetta 3 isezandleni zakho, Uba nemidlalo enemiphumela engcono kakhulu. Lokhu okunye.
Thola ulwazi futhi uphakamise izinga lakho: Ukwenza ngcono nokugqama kuzokunika amathuba amaningi futhi uzothola inzuzo ngaphezu kwabo bonke abanye abadlali. Nakhu ukuthi uzokhuphuka futhi uthuthukise amathuba ohlamvu lwakho, kanye namakhono akho.
Thola ukuthi iyiphi iBayonetta 3 enayo: Ngeke sibe khona isikhali esingcono ukwedlula imininingwane. Ukukhumbula ukuthi yimaphi amathuluzi abekwa ngumdlalo wevidiyo ukunqoba izithiyo kubalulekile ukuxazulula izinkinga ngokushesha okukhulu
Sebenzisa amasu amasha: Noma ngabe wakhe eyodwa isu ngazo ukhululekile, ungayeki ukuzama izinto ezintsha, ngoba kukunikeza ithuba lokuthola amasu awusizo azokusiza uthuthuke.
Enza ngendlela oyifisayo izilawuli nezilungiselelo: Shintsha ubukhali, izilawuli nazo zonke izilungiselelo ongakwenza ukuze ukudlala kube lula kuwe. Ukwenza ngezifiso izilawuli kukuvumela ukuthi uvumelane nomdlalo nezidingo zakho ukuze imiphumela yakho ibe ngcono.
Amapulatifomu lapho ungazama khona iBayonetta 3
Ngenhlanhla, umdlalo wevidiyo ingadlalwa kuma-consoles ahlukahlukene naku-PC, lapho-ke, asikho isizathu sokuyeka ukuhlola inguqulo ezokhishwa. Ezinye izindlela ezizokwenziwa zitholakale ukuyidlala kukhonsoli zizoba PlayStation y Xbox, lapho uzoba nethuba loku dlala nabanye abadlali online noma dlala imidlalo endaweni uma uthanda.
Ngendlela efanayo izotholakala dlala efwini ngokusebenzisa amapulatifomu afana ne-Steam ne-Stadia ye-PC. Ukuwasebenzisa awudingi ukuba nekhonsoli yakamuva emakethe noma ikhompyutha enezici ezikhethekile ube nemidlalo emnandi kakhulu.
Okudingwa ngabadali bayo ukuthi abantu abaningi ngangokunokwenzeka bayakwazi ukufinyelela iBayonetta 3. Ngakho-ke izokhishwa ngezinhlobo ezihlukile Ukudlala okuzolula futhi kube mnandi, konke kuncike kokuthandayo.
Manje uma ungakwazi ukuthenga zonke izinhlobo ozifunayo futhi kunalokho udinga ukunquma ngeyodwa nje, ungakhathazeki, zonke izinhlobo zinokuzijabulisa okuhle futhi ziqinisekisa ukuthi uzokujabulela imidlalo eyingqayizivele ngawodwana nangamaqembu.
Ngabe ufisa ukuthola iBayonetta 3? Nazi ezinye izindlela zakho
Uma okufunayo thola i-bayonetta 3, umane udinga ukuvakashela i- isitolo osithandayo, lapho uya khona njalo. Ngemuva kokuthi usuku lokukhishwa selufikile, ungaluthola kuwo wonke ama-consoles atholakalayo ngentengo engabizi.
Lokhu kujwayelekile kunanoma yini nge imidlalo yokududuza njenge-PlayStation, noma i-Xbox; induduzo lapho abadlali babo bezizwa bezolile futhi bejabulela ukuba ne- Uhlobo lwangempela lwemidlalo.
Enye indlela, uma ungafuni ukushiya ikhaya lakho, ukuthenga online. Ungakwenza ngokusebenzisa izitolo zegeyimu yevidiyo eku-inthanethi, noma futhi ku amapulatifomu aku-inthanethi, ngendlela elula neqinisekisiwe.
Si thenga kulezi zitolo eziku-inthanethi, wonga isikhathi nomzamo futhi i-oda lakho lizofika emnyango wendlu yakho, noma ungacela futhi inguqulo ebonakalayo, uyilande bese uyifaka kukhonsoli yakho.
Kepha futhi amapulatifomu anjengeStadia noma iSteam, akuvumela ukuthi uthokoze ngemuva kokukhipha inkokhelo, usebenzisa amaseva abo, okusho ukuthi ungadlala inqobo nje uma uxhumeke kwi-Intanethi nangaphansi kokubhalisile.
Ukuqasha le nsizakalo kusho, ngesikhathi esifushane, a ukukhishwa okuncane kunokuthenga umdlalo wokuqala, futhi kukuvumela ukuthi udlale imidlalo eminingi ehlukene isikhathi esilinganiselwe.
Akukho okunye okuqiniseke njengalesi sisho Ukuzilolonga kwenza inkosi, futhi indlela engcono kakhulu yokwenza kahle entweni ethile ukukusebenzisa. Lapho wenza umsebenzi ngokwengeziwe, uba uchwepheshe ngokwengeziwe.
Kwenzeka okufanayo nangemidlalo. Uma ungumakadebona onamandla kakhudlwana, uzophendula ngokwengeziwe nobuchopho bakho izoba namandla wokwakha amasu ayinkimbinkimbi ngokwengeziwe. Ngakho-ke uma okudingayo kungukuthi funda ukudlala iBayonetta 3 Into yokuqala okudingeka uyenze ukuzola futhi uzijwayeze njalo.
Ukuze ube ngophambili kufanele futhi hlangana nezitha zakho. Indlela yokuhamba kwabo, amasu abo namasu. Ukuziqonda, kuzodingeka ukuzihlaziya ngokucophelela okukhulu. Yizinto ezizosizakala kuwe ukuzinqoba. Uzokwazi ukuthola ukuthi amandla ayo nobuthakathaka bayo buyini. Futhi, udinga yazi ukuziphatha kwabaphikisana nawe. Noma ngabe bangama-NPC noma abadlali bangempela, bonke basebenzisa amakhono namasu okuthi, uma ubazi, ungathola ukuthi ungawaqeda kanjani kalula futhi ube ngophambili.
Uma ukwazi ukuzihlaziya kahle, ungathola ubuthakathaka bazo futhi uzokwazi ukuthi ungawasebenzisa kanjani amaphutha abo. Ukwazi umphikisi wakho kukunikeza inzuzo ngaphezu kwakhe.
Kepha linda, umbuzo awupheli ngomphikisi. Uzofika ezingeni lapho uzoba namandla kakhulu khona, ukuze uzenze isitha sakho, ngendlela enhle. Cabanga ngamaqhinga akho futhi isebenza kangcono nsuku zonke. Ungahlala ungcono.
Esikhathini lapho ufunda ezinye izimbangi ungathola amandla nobuthakathaka babo. Into enhle ongayenza ukuthatha konke okusizayo, akusho ukwenza amasu abo ngokufana ncamashi, kepha ngokufunda kubo nokwengeza isitayela sakho kubo.
Ekugcineni, sungula amasu, dlala ngomoya ophansi, futhi njalo udlale ngokusobala. Lezi yizindawo eziyinhloko zokuba umdlali weBayonetta ohamba phambili 3. Landela lezi zeluleko futhi uzosondela eduze abe inkanyezi.
Chofoza ukuze wabelane ku-LinkedIn (Ivula ewindini elisha)
Chofoza ukuze wabelane ku-WhatsApp (Ivula ewindini elisha)
Chofoza ukuze wabelane kuTumblr (Ivula ewindini elisha)
Chofoza ukuze wabelane ngePocket (Ivula ewindini elisha)
Mina gusta Iyalayisha ...
Yonke imininingwane odinga ukuyazi ukuqala ukudlala i-Elden Ring
I-Elden Ring ngomunye wemidlalo leyo ingeza abalandeli abaningi. Indlela yayo ephoqayo yokuthuthukisa nokubandakanya umdlali idala ukuthi abalandeli bayo bagcine sebethembeke kakhulu nokuthi labo abangakayithandi bafuna ukuyidlala.
Kulabo abaqala ukuzama i-Elden Ring, sinikeza lo mhlahlandlela ophelele onamathiphu awusizo kakhulu. Ngalolu lwazi ungathola umbono ocacile walokho okufanele ukwenze ukuze uqale ukudlala ngaphandle kokuphazamiseka ngokuphelele.
Idethi yokukhishwa komdlalo
Abalandeli be Elden Ring Kufanele ngabe sebevele belungiselela ukuthi umdlalo wokuqala wenzeke kungekudala usuku lokukhulula, abangadlala kuzo aduduzayo-iyatholakala. Ngamathuba amahle kakhulu wegeyimu yevidiyo, ukufika komdlalo wevidiyo kulangazelelwa ukuthi ukwazi ukujabulela zonke izinto ezintsha ozoletha nazo.
Amathiphu wokugqama eringini lase-Elden
Kuyathinta futhi, qala ukukhumbula i- amathiphu wokukusiza, ngesikhathi i-Elden Ring isesandleni sakho, ungathola imidlalo ngokusebenza okungcono. Sinezinto zakho.
Thola isipiliyoni futhi ukhuphuke: Inqubekela phambili nokuguquka kuzokunika amathuba amaningi futhi uzoba nethuba ngaphezu kwabo bonke abanye abadlali. Ngale ndlela uzokhuphuka futhi uthuthukise amathuba ohlamvu lwakho, ngaphezu kwamakhono akho.
Thola ukuthi yini i-Elden Ring enayo: Ngeke sibe khona isikhali esingcono ukwedlula ulwazi. Ukukhumbula ukuthi yimaphi amathuluzi abekwa ngumdlalo wevidiyo ukuze unqobe izithiyo kubalulekile ukuxazulula izinkinga ngokushesha
Batfola izindlela ezahlukene ukudlala: Kwesinye isikhathi a indlela yokudlala Kuyasisebenzela, kepha ngokuzama izinketho ezintsha unethuba elingcono lokuthola izindlela zokwenza ngcono nokufeza inhloso ngekhono elikhulu.
Yenza izilungiselelo ozidingayo: Ukwenza izinguquko ongazenza kuzilungiselelo zegeyimu kungakusiza ukuthi uzwane kalula ngenkathi udlala umdlalo. Olunye ushintsho ongalwenza kungenzeka luthinta isikrini, umsindo, izilawuli, noma yini ekuvumela ukuthi udlale kangcono.
Yiziphi izindlela ongadlala ngazo i-Elden Ring online?
Ngenhlanhla, uzokwazi ukudlala lo mdlalo kuma-consoles ahlukahlukene nakukhompyutha yakho, ngakho-ke asikho isizathu sokuyeka ukuzama inguqulo ezokhishwa. Ezinye izindlela ezizotholakala ukuthi ziyakujabulela kukhonsoli yilezi PlayStation y Xbox, lapho kungenzeka khona dlala nabanye abadlali online noma dlala imidlalo ekhaya uma uthanda.
Inhloso enkulu ye- qalisa ngezinhlobo ezahlukahlukene ngukuthi umdlalo wevidiyo ukwazile ukufinyelela izethameli ezinkulu kunazo zonke nokuthi futhi nokwabelana nabanye abadlali kulula futhi kuyajabulisa. Ngokuya ngokuthanda kwakho, unethuba lokukhetha noma yiziphi izinketho ezinikezwa yi-Elden Ring.
Ngokufanayo, zonke izinhlobo ziyahlekisa futhi zinikeza ithuba lokuthi thokozela umuzwa omuhle kakhulu ngamunye kanye namaqembu.
Ngenxa yale mizila ungathola i-Elden Ring
Into yokuqala okufanele uyenze thenga i-Elden Ring ukuya esitolo esiseduzane nefulethi lakho, noma lowo oya njalo. Ngemuva kosuku lokukhishwa lomdlalo wakho, futhi ezinsukwini ezilandelayo, uzokwazi ukulibona litholakala kuwo wonke amapulatifomu alo.
Kuwo wonke amafayili we- abadlali beqiniso, ngaso sonke isikhathi kungcono ukuba ne- Uhlobo lwangempela lwemidlalo yevidiyo. Ngale ndlela, basebenzisana nokwakhiwa kwemidlalo eminingi yevidiyo futhi basekele ama-franchise amakhulu.
Kepha ngeke uyithole kuphela kuzikhungo ezingokwenyama, kepha uzokwazi nokuthenga ngaphakathi izitolo zegeyimu yevidiyo eku-inthanethi noma ku amapulatifomu aku-inthanethi lapho une-akhawunti kuphela, uzokwazi ukuthenga.
Si uthenga kulezi zitolo eziku-inthanethi, wonga isikhathi nomzamo futhi i-oda lakho lizofinyelela emnyango wakho, noma ungathenga nohlobo olubonakalayo, ulilande bese ulifaka kukhonsoli yakho.
Ngaphezu kwezitolo zemidlalo yevidiyo, kunenketho yokudlala ngokuqasha iphakheji yokubhaliselwe. Kulokhu, awuthengi umdlalo uqobo, kodwa unelungelo lokusebenzisa iziqu eziningi ezahlukahlukene isikhathi esinqunyiwe. Lokhu kunjalo ngeStadia noma iSteam.
Into enhle ngalezi zingxenyekazi intengo yazo. Khokha okubhaliselwe okungabizi kakhulu kunokuthenga umdlalo wevidiyo, futhi kwenza kube lula ukungena ezihlokweni ezahlukahlukene.
Ungaba mkhulu kanjani e-Elden Ring?
Sonke siqala njengama-novice njalo lapho sihlangabezana nokuhlukile, noma ngabe sinolwazi olunjani lwesikhathi esidlule kwezinye izindawo, ukuqala okuthile kusukela ekuqaleni kuhlale kuyinto entsha, kepha khululeka, ngomzamo uzoba yingcweti.
Njengoba besesikutshelile, kufanele uzijwayeze kukho konke othemba ukukwenza ngendlela enhle. Ngalesi sikhathi, imidlalo yevidiyo. Lapho uqhubeka uzijwayeza, kulapho ukwazi khona funda izimfihlo zeringi yase-Elden. Uma kunjalo, uma ngabe ufunani ube ngumdlali ohamba phambili we-Elden Ring, lapho-ke sincoma ukuthi uqale ukuzijwayeza, uzokufeza ngokubekezela.
Ukuze ube ngophambili kufanele futhi hlangana nabaphikisi bakho. Isitayela seminyakazo yakho, amasu akho namakhono akho. Ngalokhu kufanele uwahlaziye ngokucophelela. Yimininingwane emincane ezosiza kakhulu ukuwahlula. Uzokwazi ukuthola ukuthi yini ubuhle bayo nobuthakathaka bayo. Thatha ukuthi yini ekuzuzisayo bese usebenzisa okungalungile. Uma ukwenza ngempumelelo, ungabasusa kalula. Noma ngabe bangama-NPC noma abadlali bangempela, bonke basebenzisa amakhono namasu okuthi, uma ubazi, ungabona ukuthi ungabashaya kanjani kalula futhi ungagqama.
Uma usutholile ukuthi ama-downsides akhe ayini, mshaye lapho kubuhlungu khona kakhulu bese umhlula. Ukuba yisinyathelo esisodwa phambili kuhlale kuyinzuzo enkulu.
Kepha linda, udaba alupheli ngomphikisi. Uzofika ezingeni lapho uzoba namandla kakhulu khona, ukuze ube ngumphikisi wakho, ngendlela enhle. Funda amasu akho futhi ujwayeze ukuba ngcono nsuku zonke. Ungahlala uthuthuka.
Ngaphezu kwalokho thola ubuthakathaka bezimbangi zakho, uzothola nokuthi yini amandla abo. Endleleni yakho yokuba ngophambili kufanele ukhombe ukuthi uzophuzelani isikhathi ngasinye. Uma kunjalo, ngeke kube kubi ukubona ukuthi yiziphi izici ezisebenza kwabanye abadlali bese uzivumelanisa nendlela yakho yokudlala.
Okokugcina, hlisa umoya, ungagxumeli esenzweni ngokuhlukumeza bese uphakamisa isu elihle elizokwenza kube lula kuwe ukuthi usabele ngendlela eyiyo, uthole imiphumela emihle kakhulu. Uma ukwazi ukulandela le miyalo, ungaba njalo okuhamba phambili ku-Elden Ring.
Ngaphandle Kwesiqondisi Somdlalo Omuhle Nobubi
Omunye wemidlalo leyo ithola abalandeli abaningi Futhi ukuthatha umfutho owengeziwe kungaphezu kokuhle nokubi 2. Lo mdlalo ukukunikeza indlela emnandi nehehayo yokwenza imidlalo engahlulwa, noma ngabe umusha noma usuvele uwudlalile umdlalo phambilini.
Manje, imininingwane esiyethula kulo mhlahlandlela ingaba wusizo olukhulu uma uqala ukudlala iBeyond Good & Evil 2 futhi ufuna ukuthola inzuzo ethile. Ngeseluleko esizokunikeza sona ngezansi, ungahle ungabi ngungoti, kepha noma kunjalo, uzoba nemininingwane eyisisekelo ezokusiza
Iqala nini ukukhonjiswa kwe-Beyond Good & Evil 2?
Sekuvele kushicilelwe ukuthi usuku lokukhishwa Ngaphandle Kokuhle Nokubi 2 kube yiwo usuku lokukhulula, kusukela kulo mzuzu kuqhubeke, abalandeli bakhe abakwazanga ukuzibamba kodwa bakhathazeka ukuthola ukuthi yimaphi amathuba amasha azolethwa yile nguqulo, angadlalwa aduduzayo-iyatholakala.
Amaqhinga okugqama ku-Beyond Good & Evil 2
Ngakho-ke, kungakuhle ukuqala ukukhuluma nge amathiphu wokukusiza, ngakho-ke lapho i-Beyond Good & Evil 2 isezandleni zakho, jabulela imidlalo enemiphumela engcono kakhulu. Sinezinto zakho.
Qhubeka uzijwayeze futhi ukhuphule izinga lakho: Ukuphelelisa amasu akho nokufinyelela amazinga aphezulu kuzokukwenza ube umdlali ongcono. Ngaphezu kwalokho, ukukhuphukela phezulu emdlalweni kuvula amathuluzi azokusiza ukufeza inhloso yakho.
Thola lokho okunikezwa yi-Beyond Good & Evil 2: Asikho isikhali esiwusizo ukwedlula imininingwane. Ukugcina engqondweni ukuthi yimaphi amathuluzi umdlalo wevidiyo owabeka ezandleni zakho ukunqoba izithiyo kuhle kakhulu ukuphendula ngokushesha ezinkingeni
Sebenzisa amasu akho ngezindlela ezihlukile: Okuningi amasu Lapho uzama kakhulu, maningi amathuba okuthi uthole noma wenze izinto ezizokwenza ube umdlali ongcono kakhulu.
Yenza ngezifiso izilawuli nezilungiselelo: Lungisa ukulungiswa, izilawuli nazo zonke izilungiselelo ezizivumela ukuthi zenze ukudlala kube lula kuwe. Ukuhlela izilawuli kukunikeza ithuba lokuthi udokhe umdlalo ezingeni lakho lokunethezeka ukuze uzuze imiphumela ephumelela kakhulu phakathi nemidlalo.
Izindlela ongazama ngazo Beyond Good & Evil 2
Uhlobo olusha lwe-Beyond Good & Evil 2 luhlanganisa konke ukuthanda, uma ungumthandi weziduduzi noma ukhetha i-PC, uzokwazi ukuzama umdlalo wevidiyo ngezindlela ezahlukahlukene. Okwe-console, ungayitholela i- I-PlayStation, i-Xbox , phakathi kokunye, kukunikeza ithuba lokuzama ekhaya noma xhuma nabanye abadlali online.
Kepha futhi ungakwenza dlala efwini ngokusebenzisa amapulatifomu anjengeSteam neStadia yekhompyutha. Ngalokhu ungenza ngaphandle kwekhonsoli yakamuva emakethe noma kwi-PC enezici ezithuthukile ku- dlala imidlalo emnandi.
Inhloso ye release ezinhlotsheni ezahlukahlukene ukuthi umdlalo ufinyelela izethameli ezinkulu kunazo zonke nokuthi ukudlala nabanye abadlali kuyatholakala futhi kumnandi. Ngokuya ngokuthanda kwakho, unethuba lokukhetha noma yiziphi izinketho ezinikezwa yi-Beyond Good & Evil 2.
Manje uma kungakutholakali ukuthola izinhlobo eziningana ngendlela ongathanda ngayo futhi kufanele uthathe isinqumo ngeyodwa nje, ungazizwa kabi, inguqulo ngayinye iba nobumnandi obukhulu futhi iqinisekise ukuthi uzophila Imidlalo enganqobeki ngawodwana nangabanye abadlali.
Ungathenga kuphi Beyond Good & Evil 2?
Into yokuqala ongayenza letha okungaphezu kokuhle nokubi 2 ukuya esitolo esiseduzane nekhaya lakho, noma lowo oya njalo. Ngemuva kosuku lokukhishwa lomdlalo wakho, nasezinsukwini eziqhubekayo, uzokwazi ukulibona lifanele kuwo wonke amapulatifomu alo.
Kuyinto evamile kulezi zinsuku ukuthi abalandeli bezinduduzo ezifana ne-PlayStation, noma i-Xbox ikakhulukazi bayakujabulela ukuba ne- izinguqulo zoqobo zakho konke ukukhishwa.
Futhi uma ungenaso isitolo segeyimu yevidiyo endaweni eseduze, ungakhathazeki, ungathenga nemidlalo oyithandayo yevidiyo ku- izitolo zegeyimu yevidiyo eku-inthanethi, noma ungene amapulatifomu aku-inthanethi, uma une-akhawunti okufanele uyithenge.
Thenga ezitolo eziku-inthanethi Kufana nokuthenga ekhaya, ngokuphepha nangokunethezeka. Ngaphezu kwalokho, le nketho ivumela isihloko sakho ukuthi sifike emnyango wendlu yakho noma, uma ufisa, ungakhetha inguqulo ebonakalayo, oyifaka ngqo kwikhonsoli yakho.
Kukhona nezinsizakalo zepulatifomu yemidlalo yokubhaliselwe. Kulawa mapulatifomu ungadlala usebenzisa amaseva wesikhulumi, usebenzisa insiza ehlala efwini. Ukuze wenze lokhu, kufanele ube noxhumano lwe-inthanethi bese ukhokha okubhaliselwe.
Ukuqasha le nsizakalo kusho, ngesikhathi esifushane, a ukukhishwa okuphansi kunokuthola umdlalo wevidiyo woqobo, futhi kuyasiza ukudlala imidlalo eminingi ehlukene isikhathi esithile.
Amanye amathiphu wokuhamba phambili ku-Beyond Good & Evil 2
Akukho okunye okuyiqiniso ngaphezu kwesisho Ukuzilolonga kwenza inkosi, futhi indlela engcono yokwenza ngcono okuthile ukukusebenzisa. Lapho wenza umsebenzi owengeziwe, uthola amakhono amaningi.
Lo mqondo ofanayo ubala nemidlalo yevidiyo. Uma ulangazelela ukuba uthisha, udinga ukuzijwayeza. Ngalokhu, ubuchopho bakho buzozivumelanisa nemiyalo nobuhlakani bokufakelwa kwe-Beyond Good & Evil 2, ukudala amapulani namasu angcono. Ngakho-ke uma ufuna ube uthisha ku-Beyond Good & Evil 2, qala ukuprakthiza.
Okunye futhi okungakusiza kakhulu funda ukuziphatha kwezitha zakho. Ukuqagela ukunyakaza kwesitha nokuhlaziya amaqhinga aso kungakusondeza ekutholeni ubuthakathaka babo. Uzokwazi ukuthola ukuthi yini ubuhle bayo nobuthakathaka bayo. Udinga futhi wazi ukuthi ungazenza kanjani izitha zakho. Noma ngabe bangama-NPC noma abadlali bangempela, bonke basebenzisa amakhono namasu okuthi, uma uwafunda, uzokwazi ukuthola ukuthi ungawaqeda kanjani kalula futhi ube ngophambili.
Lapho usutholile ukuthi ubuthakathaka bakhe buyini, mhlasele lapho kubi khona kakhulu bese umbulala. Ukuhlala isinyathelo esisodwa phambili njalo kusho amathuba angcono.
Ngokunjalo thola ukuthi yini ukushiyeka kwakho Kuzokusiza ukuwaqinisa futhi kukuqinise, ngakho-ke futhi ubuyekeze amaqhinga akho bese uwahlula njalo lapho uthola ithuba. Akunandaba ukuthi bake bakusiza phambilini, impela ungakhula kakhulu.
del ukuhlaziywa kwabaphikisi bakho Uzothola izinhlobo ezimbili zezinto: lezo ezenza kahle nezingazazi kahle. Kokubi sivele senza imibono; uwasebenzise ngokunenzuzo. Kuhle ukufunda kulabo abenza kahle. Akukhona nje ukuyikopisha, kungcono ukuyilungisa kumasu akho nendlela yakho yokudlala, ukuze uqhubeke esikhaleni lapho uqhuba kahle khona.
Okokugcina, ungathathi ngamawala, hlela kahle amasu akho bese uzibekela imigomo yesikhashana. Ngale ndlela uzofinyelela kancane kancane ezinhlosweni zakho. Uma ulandela lezi zeluleko, usuku ngalunye uzosondela ekubeni okungcono kakhulu ku-Beyond Good & Evil 2.
Umhlahlandlela wegeyimu yevidiyo ye-Dead Island 2
I-Dead Island 2 ingenye yemidlalo yevidiyo leyo ithola abalandeli abaningi. Indlela yayo emnandi yokuziveza nokubandakanya umdlali idala ukuthi labo abayidlalayo bathembeke ngokwengeziwe nokuthi labo abangakayidlali basafuna ukuyizama.
Kulabo abasha ku-Dead Island 2, sinikeza lo mhlahlandlela ophelele oqukethe amathiphu awusizo kakhulu. Ngalolu lwazi uzokwazi ukuba nomqondo obanzi walokho okufanele ukwenze ukuze uqale ukudlala ngaphandle kokulahleka ngokuphelele.
Sekuvele umphakathi ukuthi umzuzu wokwethulwa I-Dead Island 2 kube yiwo usuku lokukhululaKusukela lolu lwazi lunikezwe, abalandeli bakhe abakwazanga ukugwema ukujabula ukwazi ukuthi yimaphi amathuba amasha azolethwa yile nguqulo angajatshulelwa aduduzayo-iyatholakala.
Amathiphu wokugqama ku-Dead Island 2
Lesi yisikhathi esihle kakhulu sokusho okuthile kuwe namaqhinga ukuze wenze imidlalo e-Dead Island 2 ngemiphumela emihleNgakho-ke lapho umdlalo ukhishwa uzozitholela isinyathelo esisodwa phambili. Lokhu kubhalwe ngezansi.
Khulisa umuzwa wakho futhi ukhuphuke: Ukuthuthuka nokuthuthuka kuzokuvulela iminyango futhi uzothola inzuzo ngaphezu kwabo bonke abanye abadlali. Nakhu ukuthi uzokhuphuka futhi uthuthukise amathuba ohlamvu lwakho, ngaphezu kwamakhono akho.
Funda ngamathuluzi ongawasebenzisa ku-Dead Island 2: Okuthile okuzokubeka phambili phambili ukwazi amathuluzi akunikezwa ngumdlalo wevidiyo. Ngokwazi ukuthi i-Dead Island 2 ikusebenzisa kanjani futhi nini, uzokwazi ukukusebenzisa ngesikhathi esifanele ukufinyelela umgomo
Zama izindlela eziningi zokudlala: Kwesinye isikhathi a indlela yokudlala Kuyasisebenzela, kepha ngokuzama izinketho ezintsha unethuba elingcono lokuthola izindlela zokwenza ngcono nokufeza inhloso kalula.
Lungisa izilungiselelo ngendlela oyithandayo: Ukuba nemidlalo lapho izilungiselelo zikunikeza induduzo kukunikeza ithuba lokuthola imiphumela engcono. Ukushintsha izilungiselelo zesikrini nomsindo noku-oda izilawuli ngokuya ngokuncamelayo kuyasiza kakhulu.
Izindlela lapho ungadlala khona i-Dead Island 2
Ngeke kube khona ongabambi iqhaza, I-Dead Island 2 izotholakala kubo bobabili abathanda ukududuzwa noma i-PC, okwenza zombili izindlela zitholakale. Phakathi kweziduduzo ezizonikeza ithuba lokujabulela umdlalo wevidiyo kukhona PlayStation y Xbox, lapho abadlali bangakwazi khona dlala endaweni yangakini noma ngokuxhuma nabanye abadlali online.
Kepha izotholakala futhi dlala efwini ngamakhasi afana ne-Steam ne-Stadia ku-PC. Ukuzisebenzisa, ngeke kudingeke ukuba nekhonsoli yakamuva emakethe noma ikhompyutha enezici ezikhethekile zokuyisebenzisa ukujabulela imidlalo bezijabulisa kakhulu
Ngokufanayo, kuzoba nethuba lokuthi dlala efwini, lapho-ke awudingi ukuba neqembu eliphambili lokuhlola i-Dead Island 2. Kumaseva ezinkundla ezifana ne-Steam ne-Stadia, uzokwazi dlala imidlalo emnandi ngokushesha.
Vele, inhloso ukujabulisa ababukeli abaningi ngangokunokwenzeka. Kwalokhu uzothola izinhlobo ezihlukile ze-Dead Island 2 eziphendula izidingo eziningi, konke kuzoncika kokuncamelayo umuntu ngamunye anakho lapho ekhetha inketho efanelekile kunazo zonke.
Uhlobo ngalunye lunikeza ubumnandi obukhulu, ngakho ungakhathazeki uma kufanele unqume ngolunye lwazo. Yiba nesipiliyoni esihle lapho uzoba nethuba lokuzama ngawodwana nangabanye abantu Kuphephile.
Ngalezi zindlela ungathenga i-Dead Island 2
para thola i-Dead Island 2 kufanele nje uye kufayela le- Isitolo sokudlala lokho kuseduze noma iya kulowo othembeke kakhulu kuye. Ngemuva kokwethulwa uzothola zonke izindlela zayo ngentengo efinyelelekayo.
Lokhu kuvame kakhulu kunakho konke nge imidlalo yokududuza njenge-PlayStation, noma i-Xbox; aduduza abasebenzisi bawo anethezekile futhi athanda ukuba ngumnikazi wawo Uhlobo lwangempela lwemidlalo.
Kepha izikhungo zomzimba akuyona ukuphela kwendlela. Uma ungenayo indawo eseduzane, noma umane ungafuni ukushiya indlu yakho, ungathenga kuyo izitolo eziku-inthanethi, noma amapulatifomu aku-inthanethi.
Iphuzu eliqinile lalezi zitolo yilokho akufanele ushiye indlu yakho uyothenga. Umdlalo ufika qathatha emnyango wakho, noma ungawulanda ngemuva kokukhipha inkokhelo bese uyifaka ngokushesha.
Kepha futhi amapulatifomu anjengeStadia noma iSteam, akuvumela ukuthi uthokoze ngemuva kokwenza inkokhelo, usebenzisa amaseva abo, okusho ukuthi ungadlala noma kunini lapho uxhumeke kwi-Intanethi nangaphansi kokubhalisile.
Ukusebenzisa le nsizakalo kusho, ngesikhathi esifushane, a inkokhelo ephansi kunokuthola umdlalo wevidiyo woqobo, futhi kusiza ukusebenzisa izihloko eziningi ngesikhathi esithile.
Ungaba kanjani ngcono e-Dead Island 2?
Sonke siqala ukuba ngama-novice njalo lapho sithola okuthile okusha, kungakhathalekile ulwazi esibe nalo kwezinye izindawo, ukuzama okuthile kusuka ekuqaleni kudala umuzwa ohlukile, kepha ukuzola, ngomsebenzi uba yingcweti.
Okufanayo kuya emidlalweni yevidiyo. Ukuhlangenwe nakho okwengeziwe onakho, kuyosabela ngokwengeziwe futhi nobuchopho bakho unekhono lokwakha amaqhinga angcono. Ngakho-ke uma lokho okufunayo kuyikho funda ukudlala i-Dead Island 2 okudingeka ukwenze ukubekezela nokuzilolonga njalo.
Enye into engenza umsebenzi wakho ube lula kakhulu hlaziya amasu ezitha zakho. Ukubikezela ukunyakaza kwesitha nokuqonda amaqhinga azo kungakusondeza ekuqhamuleni izindawo zawo ezibuthakathaka. Uzokwazi ukuthola okwenzayo okulungile nokungalungile. Udinga futhi funda ukuthi ungadlala kanjani kubaphikisi bakho. Noma ngabe bangama-NPC noma abadlali bangempela, bonke basebenzisa amakhono namasu okuthi, uma ubazi, ungathola ukuthi ungawahlula kanjani kalula futhi ube ngophambili.
Ngokwazi ukuthi isitha senza okuhle nokuthi yini engalungile, uzoba nethuba elingaphezu kwaso. Kuzoncika kulwazi lwakho ukuze ukwazi ukusebenzisa lelo thuba ukunqoba.
Futhi, thola ukuthi ubuthakathaka bakho buyini Kuzokusiza ukuwaqinisa futhi ukuqinise, ngakho-ke funda amasu akho futhi uwathuthukise njalo lapho uthola ithuba. Akunandaba ukuthi bake bakusebenzela phambilini, impela ungathuthuka.
del ukuhlaziywa kwabaphikisi bakho Uzothola izinto ezimbili: ukuthi zinjani ezinhle nokuthi yini ezingalungile kangako kuzo. Kwababi esivele siziveza thina; uwasebenzise ngokunenzuzo. Izinto ezinhle kuhle ukuzifunda. Akukona nje ukukwenza njengoba kunjalo, inhloso ukuyivumelanisa namasu akho nendlela yakho yokudlala, ukuze uqhubeke endaweni lapho uzolile khona.
Ekugcineni, ungazenzi uhlanya, namathela kumaqhinga akho bese uzibekela imigomo yesikhashana. Ngale ndlela uzokwazi ukufeza izinhloso zakho kancane kancane. Uma ulandela lezi zeluleko, uzosondela ekubeni enye yezinto ezinhle kakhulu e-Dead Island 2.
Konke odinga ukukwazi ukuqala ukujabulela iBeyond Good & Evil 2
Omunye wemidlalo yevidiyo leyo kuya ngokuya kwanda Futhi ukuthatha i-boom eyengeziwe yi-Beyond Good & Evil 2. Le geyimu yevidiyo ikunikeza umuzwa ojabulisayo nohehayo ongathuthukisa ngawo imidlalo engenakuqhathaniswa, noma ngabe usaqala noma usuvele uwudlalile umdlalo phambilini.
Ngaphezu kwalokho, imininingwane ekule mhlahlandlela ingaba wusizo olukhulu uma usanda kuqala ku-Beyond Good & Evil 2 futhi ufuna ukuthola inzuzo ethile. Ngezincomo esinazo manje, ungahle ungabi ngungoti, kepha uzothola imininingwane eyisisekelo ezokusiza
Abathandi be Ngaphandle Kokuhle Nokubi 2 balungiselela ukuthola umdlalo wokuqala womdlalo kungekudala usuku lokukhulula, ongajabulela kuyo aduduzayo-iyatholakala. Ngamathuba amahle kakhulu wegeyimu yevidiyo, ukufika komdlalo wevidiyo kulindeleke ukuthi ukwazi ukujabulela zonke izindaba ozoziletha.
Amathiphu wokugqama ku-Beyond Good & Evil 2
Ngokusobala yithuba elingcono kakhulu lokukunikeza amaqhinga enza kube lula kuwe ukufeza imidlalo engakholeki lapho iBeyond Good & Evil 2 isesandleni sakho. Ezinye zingokulandelayo.
Khulisa umuzwa wakho futhi uphakamise izinga lakho: Ukuthuthuka nokuthuthuka kuzokunika amathuba amaningi futhi uzoba nethuba maqondana nabanye abadlali. Le yindlela ozonqoba futhi uthuthukise amathuba ohlamvu lwakho, ngaphezu kwamakhono akho.
Thola lokho okunikezwa yi-Beyond Good & Evil: Uma okuthile kuzokunika ithuba, "yazi." Ukuchazwa ukuthi yimaphi amathuluzi omdlalo nokuthi angasetshenziswa kanjani kubalulekile ukunqoba izithiyo ezingaba semdlalweni
Sebenzisa amasu enoveli: Noma ngabe wenze ifayili le- isu Ozizwa wanelisekile ngazo, zama izinto ezintsha njalo, ngoba kukunika ithuba lokuthola amasu awusizo azokuvumela ukuthi uthuthuke.
Shintsha izilungiselelo ozidingayo: Ukwenza ukwahluka okudingayo kumasethingi wegeyimu yevidiyo kuzokusiza ukuthi ubhekane kalula lapho udlala. Olunye lwezilungiselelo okufanele luguqulwe kungenzeka luthinta isixazululo, umsindo, izilawuli noma yini ekuvumela ukuthi wenze kangcono.
Amapulatifomu okuzodlalwa kuwo Beyond Good & Evil 2
Uhlobo olusha lwe-Beyond Good & Evil 2 lolwabo bonke abantu, uma ungumlandeli weziduduzi noma ukhetha i-PC, umdlalo ungahlolwa ngezindlela ezahlukahlukene. Okwe-console, ungayitholela i- I-PlayStation, i-Xbox nabanye, bakunikeze ithuba lokuzama ekhaya noma xhuma nabanye abantu ku-inthanethi.
Ngendlela efanayo izotholakala dlala efwini usebenzisa amakhasi afana ne-Steam ne-Stadia kukhompyutha. Ngalokhu ngeke kudingeke ukuba nekhonsoli yakamuva emakethe noma ikhompyutha enezici ezikhethekile yiba nemidlalo emnandi
Lokho okukhethayo kuzohlangana kakhulu nokuthanda kwakho nebhajethi yakho. Ngale ndlela ungakwazi thola okungaphezu kokuhle nokubi 2 kuzinguqulo ezihlukile. Okufunwayo ukufinyelela izethameli ezinkulu kunazo zonke futhi kwenze ukujabulela umdlalo kube lula kuwo wonke umuntu.
Ngokufanayo, inguqulo ngayinye inezinketho zokuzijabulisa futhi yenza ukutholakala kube nokwenzeka jabulela isipiliyoni esihle kakhulu sokudlala ngawodwana noma ngamaqembu.
Ngidinga ukuthenga iBeyond Good & Evil 2, ngingaya kuphi?
Isinyathelo sokuqala thola okungaphezu kokuhle nokubi 2 ukuvakashela isitolo esiseduzane nekhaya lakho, noma leso ohlala uya kuso. Lapho usuku lokukhishwa lomdlalo wakho selufikile, nasezinsukwini ezilandelayo, ungalibona litholakala kuwo wonke amapulatifomu alo.
Kuyindaba ye- imidlalo yokududuza njenge-PlayStation, noma i-Xbox. Ikakhulukazi, kubo bonke abalandeli abakha imizwa emihle ngokuba nefa labo Uhlobo lwangempela lwemidlalo oyithandayo.
Kodwa-ke, ngeke uyithole kuphela ezitolo zomzimba, kepha uzokwazi nokuyithola izitolo zegeyimu yevidiyo eku-inthanethi noma ku amapulatifomu aku-inthanethi lapho udinga khona kuphela ukuba ne-akhawunti eyodwa ukuze uthenge.
Si uthenga kulezi zitolo eziku-inthanethi, wonga isikhathi nomsebenzi futhi umdlalo wakho uzofinyelela ekhaya lakho, noma ungathenga nohlobo olubonakalayo, ulilande bese ulifaka kukhonsoli yakho.
Ngaphandle kwezitolo zemidlalo yevidiyo, kukhona okunye ukudlala ngaphansi kwephakheji lokubhaliselwe. Kulokhu, awuthengi umdlalo uqobo, kepha unelungelo lokujabulela imidlalo ehlukahlukene yesikhathi esithile. Lokhu kunjalo ngeStadia noma iSteam.
Ukusebenzisa le nsizakalo kusho, ngesikhathi esifushane, a inkokhelo ephansi kunokuthenga umdlalo wevidiyo woqobo, futhi kukuvumela ukuthi uthokozele izihloko eziningi ngesikhathi esithile.
Ungayifunda kanjani ukudlala i-Beyond Good & Evil 2?
Sonke siqala njengama-novice ngaso sonke isikhathi lapho sizwa okuthile okusha, kungakhathalekile ukuthi sinalo ulwazi oludlule esinalo kwezinye izici, ukuqala okuthile kusukela ekuqaleni kuhlale kuyinto ehlukile, kepha uzolile, ngokuzijwayeza uzoba yingcweti.
Kuthiwani Ukuzilolonga kwenza inkosi ingasetshenziswa futhi emidlalweni. Lapho usebenza ngokwengeziwe, ulungela kangcono ukulawulwa nezimpendulo ze-AI ze-Beyond Good & Evil 2. Ngakho-ke uma ufisa ube omunye wabahamba phambili ku-Beyond Good & Evil 2, Zigcwalise ngokubekezela nentando enhle, futhi uzijwayeze isikhathi eside.
Okunye okusiza ukukhulisa amasu akho yi funda izimbangi zakho. Ungabona ukuthi yenzani okulungile nokungalungile. Udinga futhi wazi ukuthi udlala kanjani nabaphikisi bakho. Noma ngabe bangama-NPC noma abadlali bangempela, bonke basebenzisa ukunyakaza namasu okuthi, uma ubazi, uzokwazi ukubona ukuthi ungabashaya kanjani kalula futhi ube ngophambili.
Lapho usubutholile ubuthakathaka bakhe, shaya lapho libuhlungu khona kakhulu bese umhlula. Ukuba yisinyathelo esisodwa phambili kuhlale kuyinzuzo enkulu.
Njengoba uhlaziye imbangi yakho, nawe kufanele buyekeza futhi uqonde amasu akho nemiphumela abakunika yona. Noma wenza kahle, ungathuthuka ngokuqinisekile kwesinye isikhathi. Hlaziya amaqhinga akho usuku nosuku bese uthola ukuthi ungaba ngcono kuphi.
Ngaphezu kwalokho thola ama-debuffs ezitha zakho, uzobona nokuthi ayini amandla abo. Emizameni yakho yokuba ngophambili, kufanele wazi ukuthi ungathwebula ini emcimbini ngamunye. Uma kunjalo, ngeke kube kubi ukubona ukuthi yiziphi izinto ezisebenzela abanye bese uzilolongele indlela yakho yokudlala.
Ekugcineni, ungathathi ngamawala, namathela kumasu akho bese uzibekela imigomo yesikhashana. Ngale ndlela uzofinyelela kancane kancane ezinhlosweni zakho. Uma ulandela lezi zeluleko, uzosondela ekubeni okungcono kakhulu ku-Beyond Good & Evil 2.
I-Copyright © 2021 · Wonke amalungelo agodliwe · AdraInformatica
Ama-Retro angama-90 Izindikimba ze-Organic · Okuphakelayo kwe-RSS · Ukufinyelela